अष्ट्रेलियामा पैसा कमाउन जान्नै पर्ने ५ कुरा
अष्ट्रेलिया । सन् २०१९ को लागि नयाँ योजना बुन्ने कसरत गर्नु भयाे हाेला । यस वर्षको लागि यहाँहरुले बनाउनुभएको सम्पूर्ण योजना सफल होओस् । यहाँको व्यक्तिगत फाइनान्समा के­कस्ता विषयहरु पर्नु पर्छ भन्ने केही बुँदाहरु प्रस्तुत गर्दैछुः
१. घर किन्न ढिलो नगरौं
जतिसुकै उमेर ढल्के पनि वा जुनसुकै समयमा अस्ट्रेलिया आएको भए पनि एउटा घर किन्ने चाहना प्रायः सबैको हुन्छ । कहिले वचतको अवस्था नमिलेर त, कहिले जागिरको अवस्था नमिलेर वा कहिले नेपालतिर घर­जग्गामा पैसा हाल्नुपर्ने भएकोले घर किन्ने साइत जुरिरहेको देखिन्न । अझ कहिलेकाहीं त समय गुज्रिँदै जाँदा आफ्ना आवश्यकता पनि बढ्दै जाने र त्यही अनुसारको घर किन्न नसकिने भएर थुप्रै व्यक्तिहरु घर किन्नबाट चुकिरहनुभएको छ । उदाहरणको लागि ३­४ वर्षसम्म यहाँ युनिट नकिनी बसेपछि अब एकै चोटी घर किन्ने भन्ने सोच धेरैमा पाइन्छ, तर आफ्नो आर्थिक अवस्थाअनुसार, आफूले चाहेको ठाउँमा घर किनेर बस्न साह्रै गाह्रो भइसकेको अवस्था छ । त्यसैले यसपालिको नयाँ वर्षमा टुलुटुलु हेरेर बसिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सकिन्छ भने युनिटबाट नै प्रोपर्टी किन्ने यात्रा शुरु गर्नुहोस् । आप्mनो आर्थिक अवस्था राम्रो हुँदै गएपछि केही वर्षमा टाउन हाउस, घर आदि थप्दै जानुहोस् । कहीं न कहीं त शुरु गर्नु प¥यो नि !
२. पैसा नफसाउँ
जब मान्छेसँग केही वचत हुन्छ, तब के गरूँ र कसो गरौँ भन्ने भावना जागृत हुन्छ । यस्तै बेलामा जोगिन सकिएन भने नराम्रोसँग फँसिन पनि सकिन्छ । कहिले अफ्रिकामा तेल निकाल्ने भनेर त कहिले नेपालतिरै जग्गा प्लटिङ भनेर विभिन्न खालका अवसरहरु आउन सक्छन् र यस्ता लगानीका प्रतिफल ज्यादै लोभलाग्दो देखाइएको हुन्छ । यस्ता ठूला प्रतिफलको लोभमा मानिसले ‘कमनसेन्स’ गुमाउने प्रवल सम्भावना हुन्छ र पैसा लगेर फँसाउने डर हुन्छ । त्यसैले हौवाको पछाडि नलागी आफूले गर्नुपर्ने आवश्यक रिसर्च गरौँ । फलानो­फलानोले लगानी गरेको ठाउँमा मैले यति गर्नु के हुन्छ र भन्ने खालको विचार त्याग्नुहोस् । ठूलाबडाले पनि राम्रो रिसर्च नगरी हालेको पैसा फँसेको कैयन उदाहरण तपाईं हामीसामु छन् !
३. बीमा गरौँ, सम्पत्ति र परिवारको बचाउ गरौँ
सम्पत्ति जोड्नु मात्र ठुलो कुरो होइन । अस्ट्रेलियाजस्तो ठाउँमा ऋण नलिई सम्पत्ति जोड्ने शायदै कोही होलान् । यसरी ऋणबाट सिर्जना गरिएको ढुकुटी तासको घर जस्तै हो, कुनै पनि बेला लड्न सक्छ । परिवारमा धेरै कमाइ गर्ने वा अन्य कुनै सदस्यको असामयिक निधन भएको खण्डमा बाँकी रहेको सदस्यले यस्ता ऋण धान्न नसक्दा बैंकले धितो लिलाम गर्ने गर्दछन् । जिन्दगीभर दुख गरेर परिवार र भविष्यको लागि जोडेको सपना केही क्षणमा नै चकनाचुर हुन सक्दछ । त्यसैले आप्mनो परिवारलाई आर्थिक विपत्ति पर्नबाट जोगाउन बेलैमा बीमा गरौँ । जीवन बीमा, अङ्ग­भङ्ग वा अशक्त बीमा, ट्रमा कभर जस्ता थुप्रै बीमा उपलब्ध छन् । जसले यहाँको आवश्यकताअनुसार, सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ । याद गरौँ जीवन बीमा गरेको खण्डमा काल गतिले मानिसको निधन भएमा पानी बाँच्ने सदस्यले ‘आर्थिक बेनेफिट’ पाउने गर्दछन् !
४. पढौं, बुझौं र शिक्षित होऔं
अहिलेको जमानामा आर्थिक रुपमा शिक्षित र जागरुक हुनु अति जरुरी छ । यसको लागि युनिभर्सिटीमा नै गएर डिग्री नै गर्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । दैनिक रुपमा आर्थिक समाचारहरु पढ्नुहोस्, के गर्दा ठीक र के गर्दा बेठीक भन्ने छुट्टयाउन सकेमा मात्र पनि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । उदाहरणको लागि आर्थिक सर­सरसल्लाहको लागि फाइनान्सियल एडभाइजरसँग परामर्श गर्ने, घर किन्ने ऋणको लागि मोर्टगेज ब्रोकरसँग सम्पर्क गर्ने आदि केही स्मार्ट तरिका हुन् । जसले थुप्रै रकम बचाउन सक्छ । नेपालबाट माइग्रेट भएर आएका हामीहरु धेरै पढेका छौं, प्रायः एक वा एकभन्दा बढी युनिभर्सिटीको डिग्री पनि छ । जसले गर्दा आफैलाई थुप्रै कुराको जानकारी रहेको भान पर्न सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा मान्छे तगडा हुने भएकोले विशेष क्षेत्रमा विशेष तालिमप्राप्त विज्ञहरु थोरै नै सही हामीभन्दा जान्ने हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप नगर्नुहोस्, पैसाको मामलामा साह्रै महँगो पर्न सक्छ !
५. उदार बनौं, दीनदुःखीलाई केही बाँडौं
पैसा कमाउनु मात्र पनि जिन्दगीको लक्ष्य बनाइनु हुन्न । संसारमा तपाईं­हामीभन्दा भाग्यले बढी ठगेका मान्छे धेरै छन् । जहाँ जसरी सकिन्छ, त्यसरी नै दीनदुःखीलाई आर्थिक सहयोग गर्न सधैँ अग्रसर हुनुहोस् । जाँड­रक्सी, चुरोट, जुवा आदिमा खर्च गर्न तत्काल बन्द गरेर यो रकम गरिवको सेवामा लगाउनु होस् । धन हुनेले नै धन नहुनेलाई हेर्ने हो । बढ्दो धनसँगै मन पनि फराकिलो पार्दै लैजानुहोस् । याद राख्नुस्, गरिबलाई बाँडेर कोही पनि आफै गरिब भएको छैन !